Donald Trump ayaa ka hadlay weerarka ay Iran ku qaaday saldhigyada uu Mareykanka ku leeyahay gudaha dalka
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa ka hadlay weerarka ay Iran ku qaaday saldhigyada uu Mareykanka ku leeyahay gudaha dalka.
Telefishenka Dowladda Iran ayaa sheegay “in Iran ay 80 askari oo Mareykan ah ku dishay” duqeymihii ay la bartilmaameedsatay saldhigyada Mareykanka ee dalka Ciraaq.
Waxay Iran intaa ku dartay in wax kahortag ah aanan lagu sameynin dhamaan gantaaladii ay ku duqeysay saldhigyada Mareykanka.
Xukuumadda Tehran ayaa sidoo kale sheegtay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ciidanka Mareykanka iyo qalab milateri ay ku burburiyeen weerarka.
Telefishenka oo soo xiganaya sarkaal sare oo katirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ayaa sheegay in bartilmaameedkoodu yahay boqol saldhig oo uu Mareykanka ku leeyahay gobolka, haddii ay xukuumadda Washington qaado tallaaba aargoosi ah.
Image captionIran oo duqeysay saldhigyo Mareykanka uu leeyahay
Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa meel aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha ee Magaalada Baqdaad ku dilay Qasem Suleimani oo madax ka ahaa cutub kamid ah ciidamada ugu awoodda badan Iran, waxaana ay Iran xilligaas ku hanjabtay in ay aargoosan doonta.